Prezidaant Saahilewerq Zewudee
Kan wiirtuu filannoo Finfinnee keessaa tokkotti argamuun sagalee ofii kennan President Sahlework Zewde, filannoon kun isa kana duraa caalaa dimokraatawaa ta’a abdii jedhu qabaachuu dubbatan.
Har’a dhufee dirqama lammummaa koo waanan ba’eef baay’ee gammadeen jira. Gama koon ennaan sagalee kennu kun kan jalqabaa koo ti. Yereoo hedduu biyya alaa waan jiraadheef gama koon carraa kana argachuu kootti gammadeera.
Yeroo darbe ennaan paarlaamaa haasaa dhaan bane haasaan dhageessiseen, itiyoopiyaa keessatti filannoo geggeessinu, isa kana duraa irra kan wayyaawee fi fooyyessaa deemuu qabna jedheen ture.
Filannoon kun akkas akka ta’u nan abdadha. Uummanni akkasitti heddumminaan ba’ee sagalee kennuun na ajaa’ibeera. Uummati mirga ofii kabachiisuuf sagalee ofii dhageessisuuf hagam akka murannoon ka’e dha kan inni mul’isu.
Filannoon adeemsa dimokraasii keessatti waan guddaa dha. Garuu adeemsa dimokraasii keessaa qaama tokko. Filannoon galma miti. Filannoo walakkeessa waa maraa goonee kan itti jiraannu miti.
Filannoon kun ennaa xumuramu guyyaa ka birootu dhufa. Kanaaf lammiiwwan Itiyoopiyaa martinuu walii galuu qabu. Kan nuti gochuu qabnu filannoo dhaan oli. Kanaaf rakkoo keenya waliin taanee furuu dhaan, Itiyoopiyaan mara keenyaaf akka mijattu kan ittiin goonuu dha. Uummata har’a yaa’e TV dhaan ilaalaan ture. Jireenyi koo naa wayyaawaa laata jedheen ba’e jedhan.
Kanaaf qaama filatamuuf itti gaafatama guddaa kennaa jira. Filannoo irratti filatamuunis kufuunis jira. Kufuu jechuun yeroo ka biroof qophaa’uu jechuu dha. Biyyoota hedduu argeeraa, akka prezidaant Obaasaanjoo filannoo irratti taajjabdummaan hojjedheera. Filannoo haala biyyattii ala goonee hin fudhannu. Waanuma dandeenye goona.
Itiyoopiyaa kana ol baasuuf martinuun keenya walii galuu qabna. Inni injifatames haala jiru simachuu qaba. Hin ta’u yoo ta’e immoo adeemsi seeraa jira. Kanaaf barumsa. Kana irraa haa barannu, yoo rabbi jedhe isa itti aanuutti waa gaarii agarsiisuuf haa yaallu.
Dura taa’aan paartii mormituu ijoo kan EZEMA Professor Biraahuu Neggaa biyyattii keessatti filannoon dhugaa ennaa geggeessamu kun isa jalqabaa ti jedhan.
Argeera jechuu hin danda’u, garuu haalli rakkisaan as jiru namoota sagalee kennaniif xiqqoo rakkisaa natti fakkaata. Kana irraan kan hafe gama nageenyaan rakkoo kana jedhamu hin dhageenye. Wiirtuulee filannoo hanga tokko keessatti loojistikaa fi hojii waliin wal qabatee rakkkoo xiqqoon jiraachuu dhageenyeerra. Guyyaa guutuu kanuma hordofuuf waajjira keessa turre. Yaada dhumaa kennuf erga xumuramee booda gara galgalaa wayya.
Dura taa’aan garee taajjabduu gamtaa Afriikaa fi prezidaantiin Naayijeeriyaa duraanii Oluugeegun Obaajsaanjoo filannoon Itiyoopiytaa kan bara 2021 akka eegametti gaarii ta’ee jira jedhan